October 2021 - 7DAY THADIN
အိမ္ေျမႇာင္ရဲ့ ခ်ီးကအႏၲရာယ္ ရွိလားဆိုရင္
October 28, 2021 December 15, 2021 - by admin
အိမ်မြှောင် ချေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ထိပ်မှာကပ်လျက်ရှိနေတဲ့အဖြူရောင်အစေ့လေးကိုသိသိသာသာမြင်ကြရမှာပါ။ အိမ်မြှောင်ချေးတုံးလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင်အောက်ဘက်မည်းနေတဲ့အပိုင်းကမစင်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကအဖြူရောင်အစေ့လေးကဆီးဖြစ်ပါတယ်။ လူအပါအဝင် တော်တော်များများသတ္တဝါတွေမှာဆီးကိုအရည်အဖြစ်နဲ့သွားပေမယ့်အိမ်မြောင်တွေကတော့အခဲပုံစံနဲ့သွားကြပါတယ်။ အဲ့သည်အဖြူရောင်လေးဟာသူတို့ရဲ့ဆီးကထွက်တဲ့ယူရစ်အက်ဆစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Crystalလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြွေတွေရဲ့ချေးဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကလည်း အိမ်မြှောင်တွေနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ အိမ်မြှောင်ရဲ့ချီးကအန္တရာယ်ရှိလားဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဆဲလ်မွန်းနဲလားလို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေအလွန်များပြားစွာပါဝင်နေလေ့ရှိပါတယ်။အင်းဆက်တွေမှာရှိတတ်ကြတဲ့အခြားဘက်တီးရီးယားတွေလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မြှောင်ချီးကိုင်မိပြီးသွားရင်ဆပ်ပြာနဲ့လက်ကိုသေချာစွာဆေးကြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစားစားမိရင်မပါသွားအောင်ဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံ/စာ crd” Zawgyi အိမ္ေျမႇာင္ ေခ်းတစ္ခုမွာဆိုရင္ထိပ္မွာကပ္လ်က္ရွိေနတဲ့အျဖဴေရာင္အေစ့ေလးကိုသိသိသာသာျမင္ၾကရမွာပါ။ အိမ္ေျမႇာင္ေခ်းတုံးေလးကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲရင္ေအာက္ဘက္မည္းေနတဲ့အပိုင္းကမစင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့အေပၚကအျဖဴေရာင္အေစ့ေလးကဆီးျဖစ္ပါတယ္။ လူအပါအဝင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသတၱဝါေတြမွာဆီးကိုအရည္အျဖစ္နဲ႔သြားေပမယ့္အိမ္ေျမာင္ေတြကေတာ့အခဲပုံစံနဲ႔သြားၾကပါတယ္။ အဲ့သည္အျဖဴေရာင္ေလးဟာသူတို့ရဲ့ဆီးကထြက္တဲ့ယူရစ္အက္ဆစ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Crystalေလးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေႁမြေတြရဲ့ေခ်းဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္ကလည္း အိမ္ေျမႇာင္ေတြနဲ႔ဆင္တူပါတယ္။ အိမ္ေျမႇာင္ရဲ့ခ်ီးကအႏၲရာယ္ရွိလားဆိုရင္အင္မတန္အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဆဲလ္မြန္းနဲလားလို့ေခၚတဲ့ဘက္တီးရီးယားေတြအလြန္မ်ားျပားစြာပါဝင္ေနေလ့ရွိပါတယ္။အင္းဆက္ေတြမွာရွိတတ္ၾကတဲ့အျခားဘက္တီးရီးယားေတြလည္းပါဝင္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလို့အိမ္ေျမႇာင္ခ်ီးကိုင္မိၿပီးသြားရင္ဆပ္ျပာနဲ႔လက္ကိုေသခ်ာစြာေဆးေၾကာဖို့လိုအပ္ပါတယ္။ အစားစားမိရင္မပါသြားေအာင္ဂ႐ုစိုက္ဖို့အေရးႀကီးပါတယ္။ …
အိမ္ေျမႇာင္ရဲ့ ခ်ီးကအႏၲရာယ္ ရွိလားဆိုရင္ Read More
ေမွ်ာ္လင့္ရင္ခုန္စြာ. . ကုန္းတစ္တန္. . ေလတစ္တန္ ခရီးနွင္ခဲ့ျပီး. . .အြန္လိုင္းခ်စ္သူနဲ့ အေတြ႕ ငုတ္တုတ္ေမ့ တုန္လႈပ္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္
October 27, 2021 December 15, 2021 - by admin
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူမှုကွန်ယက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုဟာ ကမ္ဘာတလွှားက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း သုံးစွဲကြပြီး မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တိုးကာ ဘဝအတွက် အထောက်အကူတွေရပြီး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေချောမွေ့သူတွေ ရှိလာကြသလို. . . အွန်လိုင်းသုံးပြီး လူမှုကွန်ယက်မျိုးစုံက အသိပညာ ဗဟုသုတ သတင်း သုတ ရသတွေ ဖတ်ရှုပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ အထွေထွေသုတတွေကို …
ေမွ်ာ္လင့္ရင္ခုန္စြာ. . ကုန္းတစ္တန္. . ေလတစ္တန္ ခရီးနွင္ခဲ့ျပီး. . .အြန္လိုင္းခ်စ္သူနဲ့ အေတြ႕ ငုတ္တုတ္ေမ့ တုန္လႈပ္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္ Read More
အန္နာကြန္ဒါေျမႀြကီး သင့္ကိုၿမိဳမယ္ဆိုရင္ ဘာေတျဖစ္လာႏိုင္မလဲ
October 26, 2021 December 15, 2021 - by admin
လွန်ခဲ့တဲ့2014လောက်တုန်းကတော်တော်ရှုးတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လူဟာအန်ဒါကွန်ဒါမြွေကိုအမြိုခံဖိူ့ကြိုးစားကြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။သူဟာကြီးမားတဲ့အကာကွယ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးဝက်သွေးတေကိုသုတ်လိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မြွေကြီးဟာဝတ်စုံရဲ့ခေါင်းပိုင်းကနေသူရဲ့ပါးစပ်ကိုဖြဲပီးစမြိုဖိူ့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဒါပေမယ့်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုမြိုနိုင်ဖိူ့ကတော့မအောင်မြင်ဘဲကျရှုံးသွားပါတယ်။အကယ်၍သာမြွေကသူကိုမျိုနိုင်သွားခဲ့ရင်တောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်size ကိုဘယ်လိူမျို နိုင်မှာလဲ. ဒီမြွေကြီးတေဟာပေ၃၀လောက်ရှည်ပြီးတော့ပေါင်၅၀၀လောက်ထိရှိပါတယ်။ပေါင်လေးဆယ်လောက်ရှိတဲ့သားကောင်ကတော့သူတိူ့ရဲ့အစာအဖြစ်စိတ်ဝင်စားနိုင်သေးပါတယ်ဒါပေမယ့်သင့်လိုပေါင်၁၀၀ကျော်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ဒီမြွေကြီးစိတ်ဝင်စားလောက်မဲ့အစာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလိူ့လဲဆိုတော့လူတေရဲ့အရွယ်အစားဟာတခြားသတ္တဝါတေလိုစားဖိူ့မလွယ်ကူတဲ့အရွယ်စားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်သင့်ကိုအန်ဒါကွန်ဒါမြွေကြီးကမြိုလိုက်ပြီလိူ့ထားပါတော့…..အန်ဒါကွန်ဒါတေဟာသင့်ကိုမမြိုခင်သင်ကိုအရင်သတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတိူ့ဟာရစ်ပတ်ပြီးသတ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်သင်တာအဲ့လိုအညစ်ခံရမယ်ဆိုရင်ချက်ခြင်းသေသွားဖိူ့ကသေချာပါတယိ။ သူတ်ူ့ိရဲ့ညစ်အားကပေါင်၉၀၀၀လောက်ရှိတာကြောင့်သင့်ကအမြန်သေ သွားမှာသိပ်အထူးဆန်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီသင်ကအဲ့လိုညစ်အားကိုခံနိုင်တယ်ဘဲထားလိုက်အုန်းထပ်ပြီးကြုံရမှာကသူရဲ့အစာခြေစနစ်တဲ့စပြီးကြုံတွေ့ရမှာပါ၊ အန်၏ကွန်ဒါတေရဲ့ပါစပ်ဟာအလွန်ကိုကျယ်ပြီးတော့သူရဲ့ပါးစပ်ဟနိုင်မှုဟာသင်တစ်ကိုယ်လူံးကိုမျိုနိုင်လောက်တဲ့ထိကိုကျယ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမြွေဟာတစ်ခြားမွေတေလိုအစိတ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါမျိုး လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတိူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာတွေ့ရမဲ့အရာတေကတော့စလိုက်ဒါလိူ်ခေါ်တဲ့အရာတေဘဲဖစ်ပါတယ်။အဲ့အရာတေကအရည်အချွဲတေထုတ်ပေးပြီးတော့သင့်ကိုမျိူ တဲ့အချိန်မှာလွယ်ကူစေမှာပါ။ ဒီလိုနဲ့သင်ဟာသူရဲ့အစာအိမ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဘဲထားလိုက်ပါတော့။သူတိူ့ရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံဟာတွန့်လိမ့်ပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ကိုသူတိူ့ရဲ့အစာအိမ်ထဲကိုရောကိအောင်တွန်းအားပေးမှာပါ။ အဲ့အချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးရင်တောင်မှသူတိူ့ရဲ့အစာအိမ်ကနေထူတ်ပေးတဲ်အက်စစ်တစ်မျိုးဟာသင်ရဲ့အရိုးတေအသားတေကိုလောင်းကျွမ်းသွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒီအက်စစ်ဟာဘယ်လောက်တောင်ပြင်းလဲဆိုရင်မိချောငိးလိုအရေခွံအထူကြီးဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုတောင်သူံးရက်အတွင်းအစာခြေပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တိူ့လိုအရေပြားအတွက်ကတော့သိပ်မတွေးပါနဲ့မြန်မြန်ဘဲပျောက်ကွယ်ပြီးအတောင်ဖော်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မကြိုးစားပါနဲ့ဒီမြွေတေဟာသင့်လိုကြီးမားတဲ့လူယောက်ကသူတိူ့အတွက်အစာမဟုတသလိုသတိူ့ကလည်းသင်ကိုစိတ်မဝင်စားပါဘူးအကယ်၍သူတိူ့ကတိုက်ခိုက်လာရင်တောင်သူတိူ့ကိုယ်သူတိူ့ကာကွယ်ဖိူ့အတွက်တိုက်ခိုက်တာဘဲဖစ်ပါတယ်။ Zawgyi လြန္ခဲ့တဲ့2014ေလာက္တုန္းကေတာ္ေတာ္႐ႈးတဲ့လူတစ္ေယာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္အဲ့လူဟာအန္ဒါကြန္ဒါ​ေႁမြက္ိုအၿမိဳခံဖိူ႔ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ဘူးပါတယ္။သူဟာႀကီးမားတဲ့အကာကြယ္ဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္ထားခဲ့ၿပီးေတာ့တစ္ကိုယ္လံုးဝက္ေသြးေတကိုသုတ္လိမ္းထားခဲ့ပါတယ္။ တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ေႁမြႀကီးဟာဝတ္စံုရဲ႕ေခါင္းပိုင္းကေနသူရဲ႕ပါးစပ္ကိုျဖဲပီးစၿမိဳဖိူ႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ဒါ​ေပမယ့္လူတစ္ကိုယ္လံုးကိုၿမိဳႏိုင္ဖိူ႔ကေတာ့မေအာင္ျမင္ဘဲက်႐ွံုးသြားပါတယ္။အကယ္၍သာေႁမြကသူကိုမ်ိဳႏိုင္သြားခဲ့ရင္ေတာင္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူတစ္ေယာက္size ကိုဘယ္လိူမ်ိဳ ႏိုင္မွာလဲ. ဒီေႁမြႀကီးေတဟာေပ၃၀ေလာက္႐ွည္ၿပီးေတာ့ေပါင္၅၀၀ေလာက္ထိ႐ွိပါတယ္။​ေပါင္ေလးဆယ္ေလာက္႐ွိတဲ့သားေကာင္ကေတာ့သူတိူ႔ရဲ႕အစာအျဖစ္စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသးပါတယ္ဒါေပမယ့္သင့္လိုေပါင္၁၀၀ေက်ာ္႐ွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကေတာ့ဒီေႁမြႀကီးစိတ္ဝင္စားေလာက္မဲ့အစာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလိူ႔လဲဆိုေတာ့လူေတရဲ႕အရြယ္အစားဟာတျခားသတၱဝါေတလိုစားဖိူ႔မလြယ္ကူတဲ့အရြယ္စားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ​ေပမယ့္သင့္ကိုအန္ဒါကြန္ဒါေႁမြႀကီးကၿမိဳလိုက္ၿပီလိူ႔ထားပါေတာ့…..အန္ဒါကြန္ဒါေတဟာသင့္ကိုမၿမိဳခင္သင္ကိုအရင္သတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတိူ႔ဟာရစ္ပတ္ၿပီးသတ္တတ္တဲ့သဘာဝ႐ွိတာေၾကာင့္သင္တာအဲ့လိုအညစ္ခံရမယ္ဆိုရင္ခ်က္ျခင္းေသသြားဖိူ႔ကေသခ်ာပါတယိ။ သူတ္ူ႔ိရဲ႕ညစ္အားကေပါင္၉၀၀၀ေလာက္႐ွိတာေၾကာင့္သင့္ကအျမန္ေသ သြားမွာသိပ္အထူးဆန္းႀကီးလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ဟုတ္ၿပီသင္ကအဲ့လိုညစ္အားက္ုိခံႏိုင္တယ္ဘဲထားလိုက္အုန္းထပ္ၿပီးၾကံဳရမွာကသူရဲ႕အစာေျခစနစ္တဲ့စၿပီးၾကံဳေတြ႔ရမွာပါ၊ အန္၏ကြန္ဒါေတရဲ႕ပါစပ္ဟာအလြန္ကိုက်ယ္ၿပီးေတာ့သူရဲ႕ပါးစပ္ဟႏိုင္မႈဟာသင္တစ္ကိုယ္လံူးက္ိုမ်ိဳႏိုင္ေလာက္တဲ့ထိကိုက်ယ္ပါတယ္။ဒါအျပင္ဒီေႁမြဟာတစ္ျခားေမြေတလိုအစိတ္႐ွိတဲ့ သတၱဝါမ်ိဳး …
အန္နာကြန္ဒါေျမႀြကီး သင့္ကိုၿမိဳမယ္ဆိုရင္ ဘာေတျဖစ္လာႏိုင္မလဲ Read More
လူေနတိုက္ခန္းကိုေဖာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရထားလမ္းႀကီး
October 24, 2021 October 24, 2021 - by admin
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပေါ်မြို့လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Chongqing မြို့မှာ ရထားလမ်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဟာ လူနေတိုက်ခန်းကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာ အလျှားလိုက် ဟိုဘက်သည်ဘက် ဖြန်သန်းတည်ဆောက်ထားတာကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ရပါ တယ်။ ဒီတည်ဆောက်မှုဟာ ဟိုဘက်သည်ဘက် တိုးလျှိုပေါက်ဥမင်တစ်ခုနဲ့ တူနေပြီး၊ ရထားဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါ ဆူညံမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အသံထိန်းဝါရှာတွေ တပ်ဆင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရထားလမ်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်ဦဟာ 19 ထပ်ပါဝင်တဲ့ လူနေအဆောက်ဦဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဆောက်ဦရဲ့ ခြောက်လွှာမှာ …
လူေနတိုက္ခန္းကိုေဖာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရထားလမ္းႀကီး Read More
ယေန႔လူေျပာမ်ားေနတဲ့ ေျမာက္ဒဂုံက ၅၀၀ က်ပ္တန္ ဇလုံထမင္းဆိုင္
ယခုခေတ်မှာဆိုရင် ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့် ထမင်းတစ်နပ် ၅၀ဝ နဲ့ရောင်းချဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဒဂုံ ရွှေရတနာရုပ်ရှင်ရုံအနီးမှာ ၅၀၀ ကျပ်ရှိရုံနဲ့ စားလို့ရမဲ့ ဇလုံထမင်းကို ရောင်းချပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇလုံထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာ ယခင်က ကားဝပ်ရှော့တစ်ခုရဲ့ အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး သူအလုပ်လုပ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ နေလည်စာစားချိန်ဆို အလုပ်ရှင်ကပေးခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏဖြင့် ဈေးချိုပြီးသက်သာတဲ့ ထမင်းဆိုင်မှာ ဗိုက်ဝအောင်စားလို့ရတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို သွားရောက် …
ယေန႔လူေျပာမ်ားေနတဲ့ ေျမာက္ဒဂုံက ၅၀၀ က်ပ္တန္ ဇလုံထမင္းဆိုင္ Read More
အေမရိကန္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ အမ်ားဆုံးပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား
Mel Bernstein လို့ အမည်ရတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသားကြီးဟာ ဝါသနာအရ ဝယ်ယူစုဆောင်းထားတဲ့ လက်နက်ပေါင်း 3000 ကျော် တည်ရှိပြီး၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် သန်းချီရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလက်နက် 3000 ကျော်ထဲမှာ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ တင့်ကားတွေ၊ လေယာဉ်ပစ် လက်နက်ကြီးတွေ မပါသေးပါဘူး။ Mel ကို သူစီးနေကျ နဂါးမီးမှုတ်ဆိုင်ကယ်ကြီးကြောင့် “နဂါးကြီး”လို့ နီးစပ်သူတွေက ရင်းရင်းနီးနီးခေါ်ကြပြီး၊ …
အေမရိကန္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ အမ်ားဆုံးပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား Read More
ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ဆင္မေလးမိုမိုမွာ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ျပည့္သြား
ငယ်ငယ်က မြန်မာ့အသံမှာ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသနေကျ မိသားစု တနင်္ဂနွေ သီချင်းလေးထဲကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေက ဆင်မလေးမိုမိုကို စသိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်မလေးမိုမိုဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ ကယားပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ၇ နှစ်သမီးအရွယ်မှာ ရောက်ရှိလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုဟာ ၇ နှစ်သမီးအရွယ်ကနေစပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကြာသည်အထိကို သူမကိုချစ်ကြတဲ့ လူတွေအားလုံး စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ …
ငယ္ငယ္ကတည္းက ခ်စ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ဆင္မေလးမိုမိုမွာ အသက္ ၆၈ ႏွစ္ျပည့္သြား Read More
သိထားသင့္တ့ဲ ေခြး နိမိတ္ (၂၀)
သိထားသင့်တဲ့ ခွေး နိမိတ် (၂၀) ခွေးနိမိတ်များ ၁။ သမီးရည်းစား လင်မယား နှစ်ယောက် တွဲလျှောက်‌နေတဲ့ကြား ခွေးဖြတ်ဝင်ရင် အဲ့ အတွဲ မကြာခင် ရန်ထသတ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ မိန်းကလေးတွေ ခြေထောက်ကြား ခွေးဖြတ်တိုးရင် သူ့ကို မကြာခင် အဖေ ဆူမလား၊ လင် ရိုက်မလား တစ်ခုခုပါပဲ။ ၃။ မွေးစကလေးကို ခွေး လျှာနဲ့ …
သိထားသင့္တ့ဲ ေခြး နိမိတ္ (၂၀) Read More
လိင္း ကိစၥမပါလဲကို႔ခ်စ္သူနဲ႔မခြဲ အတူေနထိုင္ႏိုင္နည္း
October 20, 2021 October 20, 2021 - by admin
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလိင္ကစၥမပါလဲအချစ်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်နည်းလမ်းကောင်းတေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ထဲမှာမှကိုကကို့ကကိုယ့်ချစ်သူကိုလိင်ကိစ္စမပါဘဲဒါမှမဟုတ် ကိုကလိင်စွမ်းဆောင်နိုင်အားနည်းနေခဲ့ရင်တောင်မှသင်ကသင်အချစ်ကိုမြတ်နိုးစွာသော်လည်းကောင်းလေးလေးနက်နက်သော်လည်းပြနိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ မိတ်ဆွေတိူ့မထင်ထားပေမယ့်တကယ့်ကိုလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Try ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ No (1) စကားများများပြောနိုင်သမျှပြောပါ စကားပြောတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်စေအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်စေဒီလိုပြောစရာလေးတေရှိနေခြင်းဟာသင်တိူ့နှစ်ယောက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့rsတစ်ခုဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောတာများလာလေတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုနားလည်လာပြီးတော့ပိုပြီးရင်နှီးတဲ့rs တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောရင်ပြောတာများလာပြီးတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုသိလာတာနဲ့အမျှနာလည်မှုကိုလည်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကအဝေးတစ်နေရာရောက်နေရင်တောင်ကိုရဲ့စကားတစ် ခွန်းကသင့်ချစ်သူအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာစေမှာပါ။ No (2) ချစ်သူနဲ့အချိန်တူတူဖြုန်းပါ ကိုချစ်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်ရခြင်းဟာအရမ်းကိုကြည်နူးဖိူ့ကောင်းတဲ့အခိုက်တန့်ဖြစ်ပြီးအရမ်းကိုပျော်ရွင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုအချိန်တူတူဖြန်းခြင်းဟာသင်ကသင့်ချစ်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖိူ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ rsတစ်ခုကအေးတိအေးစက်ဖြစ်နေပြီးပျော်ဖိူ့မကောင်းတော့ရင်တောင်မှအချိန်တူတူဖြုန်းပြီးဂရုစိုက်လိုက်ခြင်းဟာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးနွေးထွေးမှူကိုပြန်လည်ရရှိပြီးအဆင်ပြေသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိူ့လိူ့သင်ကသင့်ရဲ့လိင်ကိစ္စအတွက်ဘဲအချိန်ဖြုန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ No (3) ကူညီမှုပေးပါ ဒီအချက်ကတော့စကားလုံးတိုပေမယ့်အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကူညီစောင့်လျှောက်တတ်တဲ့လက်တစ်စုံဟာချစ်ခြင်းကိုပြဖိူ့အတွက်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုလုံးဝမေ့လိူ့မရပါဘူး။သင်ချစ်သူကအကူညီလိုအပ်နေပြီဆိုရင်အကူညီပေးရမဲ့သူကသင်ဖြစ်နေဖိူ့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလိူ့လဲ?ဘာလိူ့လဲဆိုတော့သင့်ချစ်သူအကူညီလိုအပ်တေတုန်းသင်ကအကူညီ မပေးနိုင်ခဲ့ရင်သင်ချစ်သူကအကူညီပေးနိုင်တဲ့သူဆီကိုဘဲသွားမှာပါအဲ့တော့မှသင်စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့။ဒါသင့်ချစ်သူရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။သင့်ရဲ့အမှားပါ။သင်ကလိင်ကိစ္စလောက်ဘဲစိတ်ရောက်နေပြီး..တကယ် အကူညီလိုအပ်ချိန်မရှိနေခဲ့ရင်ဒါဟာသင့်ရဲ့လစ်ဟင်းမှုဘဲဖစ်ပါတယ်ဘယ်သူကို့မှအပြစ်တင်လိူ့မရပါဘူး။သင်မှာပြိုင်ဆိုင်မဲ့လူမရှိဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမယ့်ပြိုင်ဆိုင်မဲ့သူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသင့်အတွက်danger zone ထဲကိုရောက်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ Zawgyi ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာလိင္ကိစၥမပါလဲအခ်စ္ကိုေဖာ္ျပဖို႔အတြက္နည္းလမ္းေကာင္းေတအမ်ားႀကီး႐ွိေနပါေသးတယ္။အဲ့ထဲမွာမွကိုကကို႔ကကိုယ့္ခ်စ္သူကိုလိင္ကိစၥမပါဘဲဒါမွမဟုတ္ ကိုကလိင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အားနည္းေနခဲ့ရင္ေတာင္မွသင္ကသင္အခ်စ္ကိုျမတ္ႏိုးစြာေသာ္လည္းေကာင္းေလးေလးနက္နက္ေသာ္လည္းျပႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းေလးေတအမ်ားႀကီး႐ွိေနပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြတိူ႔မထင္ထားေပမယ့္တကယ့္ကိုလြယ္ကူၿပီး႐ိုး႐ွင္းတဲ့နည္းလမ္းေလးေတျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္Try …
လိင္း ကိစၥမပါလဲကို႔ခ်စ္သူနဲ႔မခြဲ အတူေနထိုင္ႏိုင္နည္း Read More
ဒီကေန႔ လျပည့္္ည သန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ႐ြတ္ဖတ္ရမည့္ ဂါထာေတာ္္
ဒီကနေ့ လပြည့်ည သန်းခေါင်ကျော် မှာ ရွတ်ဖတ် ရမည့် ဂါထာတော် ယနေ့လပြည့််နေ့ ညသန်းခေါင်ကျော် ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှ ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ် အတွင်း အိပ်ယာ နိးသူများ နင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် အိပ်မပျော်သူ များ အိပ်ရာ ဝင်ရောက်ရောက်သူများ အိပ်ရာ အစောထသူများ (၅ …
ဒီကေန႔ လျပည့္္ည သန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ႐ြတ္ဖတ္ရမည့္ ဂါထာေတာ္္ Read More